ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်း၏ကမ္ဘာကြီးကို 2015 ကတည်းကထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာကစားတော်မမူသောသူတစ်စုံတစ်ဦးကဂိမ်းစတင်သောအခါသူတို့ကြုံတွေ့နေကြတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်မည်မဟုတ်ကြောင်းအတိတ်နှစ်များတွင်ဤမျှလောက်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အခမဲ့လိင်ဂိမ်းများတွင်ငါတို့သည်သင်တို့ဝဘ်ပေါ်တွင်ရှာတှေ့နိုငျသောအမာခံလိင်ဂိမ်း၏အကြီးမားဆုံးစုဆောင်းမှုတစ်ခုနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။ ကျနော်တို့သင်အပြန်အလှန်လိင်ဂိမ်းအတွက်တွေ့ကြုံခံစားချင်အံ့သောငှါလူအပေါင်းတို့သည်အမာခံမျိုးနှင့်အမျိုးအစားများရှိသည်,ငါတို့ဂိမ်းများ၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသင့်ဦးနှောက်ကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌လိင်ရှိခြင်းနေစဉ်းစားစတင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အဆင့်မြင့်သည်။, ကစားသမားအချို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းကစားနေစဉ်သူတို့ရှိသည်သောကွန်ပျူတာကိုသူတို့ချက်တင်မော်ဒယ်များနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကွန်ဖရင့်လိင်ဆက်ဆံကြသောအခါသူတို့ရသကဲ့သို့ပြင်းထန်သောဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
ထိုအသင်တို့သည်ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းများကိုအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းထင်သည့်အခါ,သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်အွန်လိုင်းအားလုံးသင့်ရဲ့ယုတ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအချိန်ရွေ့လျားထည့်သွင်းစဉ်းစားစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှယုတ်ကစားသမားကြိုဆိုရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်အသက်ရှင်နေထိုင်ချင်သောအရာကိုထင်,သင်သည်ဤစုဆောင်းမှု၌သင်တို့ကိုနှစ်သက်ဖို့တစ်ခုခုတွေ့လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ဂိမ်းရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူလာကျနော်တို့ပုံမှန်အသစ်တွေထည့်ပါ။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ဂိမ်းအချို့သင်သည်ထိုသူတို့အတွက်ခြစ်ရာမှသင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးယဉ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကူး., ဤဆိုဒ္ရွိအရာအားလံုးသည္ေခတ္ကာလမွလာျခင္းျဖစ္သည္။မည္သည့္စက္ပစၥည္းတြင္မဆိုသင္၏ဘေရာက္ဇာတြင္ဂိမ္းကစားျခင္းႏွင့္အတူလက္ဝါးကပ္တိုင္ပလက္ေဖာင္းရရွိမႈအခ်ိဳ႕ကိုခံစားရမည္ကိုဆိုလိုသည္။မည္သည့္စက္ပစၥည္းတြင္မဆိုေဒါင္းလုဒ္သို႔မဟုတ္အရစ္က်ျဖင့္ဂိမ္းကစားျခင္းကိုလည္းျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင်ပင်ဂိမ်းကစားခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအားလုံးအခမဲ့နှင့်သင်အံ့သြဖွယ်အချိန်ပူဇော်ဖို့အဆင်သင့်ပဲ!
ငါဂိမ်းရာပေါင်းများစွာရှိသည်နှင့်၎င်းတို့၏အဓိကအကြောင်းအရာပေါ်အခြေခံပြီးအမျိုးအစားများအပေါ်ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ဦးညစ်ညမ်းပြွန်အပေါ်ရှာတှေ့နိုငျသောသူအပေါင်းတို့သည်အဓိကအမျိုးအစားများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားခြင်း၏ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်များသောအမျိုးအစားများနှင့်အတူညစ်ညမ်းတစ်ခုလုံးကိုကမ္ဘာကြီးကိုဖုံးလွှမ်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဧည့်သည်များအားဖြင့်ကစားကြသည်သောလူကြိုက်အများဆုံးအတွက်သင်အခမဲ့လိင်ပြွန်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြတယ်ဆိုတာကိုတူညီတွေ့လိမ့်မည်။, မိသားစုလိင်ဂိမ်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးတန်ဖိုးထား,ငါတို့သည်သင်တို့၏အမှန်တကယ်မထီမဲ့မြင်ကျူးလွန်နေသကဲ့သို့ခံစားစတင်ပါလိမ့်မယ်ဇာတ်လမ်းအဘို့ဤမျှလောက်များစွာသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုနှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ကြောင်းစွန့်စားအတွက်အမေ,သမီးများနှင့်ညီအစ်မတွေအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပူဇော်. တကယ့္လက္ေတြ႕ဘ၀နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ဂိမ္းအမ်ိဳးအစားေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ဘီလ္ဂိတ္အမ်ိဳးအစားထဲမွာပါ၀င္ပါတယ္။ တကယ့်အစစ်အမှန်များအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာဂိမ်းများတွင်အသံဖမ်း။ ထိုသူငယ်သည်ငိုကြွေးအော်ဟစ်ကြလိမ့်မည်,သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့ဝမ်းနည်းခံစားစတင်ပါလိမ့်မည်ထိုကဲ့သို့သောလက်တွေ့ကျကျအသံတွေနှင့်အတူသနားခြင်းကရုဏာသည်တောင်းခံ.
ဒါေပမယ့္ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာကစားနည္းတခ်ိဳ႕လည္းရွိပါတယ္။ ရုပ်ပြောင်လိင်ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုသင်ရုပ်ရှင်,တီဗီရှိုးကနေဇာတ်ကောင်နှင့်ပတ်သက်.ရှိစေခြင်းငှါ,အမျိုးမျိုး၏စိတ်ကူးယဉ်နိုင်ပါတယ်,အဓိကအားဖြင့်ကာတွန်း,ကာတွန်းနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဗီဒီယိုဂိမ်း. အေးခဲနေသောမှအဲလ်ဆာကိုကျော်၍ကြယ်စစ်ပွဲများမှပင်ပြန်လည်ရယူခြင်းသည်ဤဂိမ်းများတွင်ငြိုငြင်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့တောင်မှဝဘ်ပေါ်မှာအသစ်ထညျ့နေသောစာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းတစ်ခုစုဆောင်းမှုနှင့်အတူလာကြ၏။ ဤဂိမ်းများသည်အခြေခံအားဖြင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအက်ပ်ပုံပြင်များဖြစ်သည်၊သင်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်သင်လမ်းတစ်လျှောက်ဇာတ်လမ်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်များချရလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းဤစာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းများတွင်ကစားနိုင်သောလိင်မြင်ကွင်းများကိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့လုံးဝအခမဲ့ဂိမ်းအသစ်များစုဆောင်းမှုကိုဆက်ကပ်ကျနော်တို့ကစားသမားမဆိုအခြားနည်းလမ်းများအတွက်ပေးဆောင်စေဘယ်တော့မှမ။ အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များသို့မဟုတ်အခြားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုရန်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုခိုးယူလိမ့်မည်ဟုဘာမှရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းကနေအခြားဆိုဒ်များရန်မပြန်ညွှန်းရှိပါတယ်။ နှင့်ပင်ကြော်ငြာတွေကျွန်တော်တို့ကိုအပြေးဆိုက်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီဖို့လုံလောက်တဲ့နိမ့်ဆုံးမှစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဂိမ်းကာလအတွင်းသင်နှောင့်အယှက်မပေးနေကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ဝဘ်ပေါ်မှာပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်သမျှရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်မှန်မှန်ဒီစုဆောင်းမှုအသစ်ဂိမ်းများကိုထည့်သွင်းစောင့်ရှောက်မည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုထံသို့လာကြ၏နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျက်တောင်ခတ်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းဖြင့်ကွာသယ်ဆောင်ကြကုန်အံ့။